Wasiirka Gaashaandhigga oo faah-faahin ka bixiyay sababta ciidanka ilaalada u ah xildhibaannada loogu reebo banaanka madaxtooyada – Kalfadhi
Qaar kamid ah xildhibaannada Golaha Shacabka Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya, ayaa ka carooday in ilaalada la socota lagu reebo banaanka madaxtooyada, kaddib amar kasoo baxay taliska ciidanka.
Amarka ayaa soo baxay ka gadaal markii al Shabaab ay weerar ku qadeen hotel SYL oo kasoo horjeeda xarunta Madaxtooyada Qaranka. Weerarkaasi ayaa kooxda waxaa ay u adeegsatay rag hubeysan oo xiran dareeska ciidanka oo socod ku galay hotelka, halkaas oo dad ku dhow 6-qof ay ku dhinteen.
Wasiirka Wasaaradda Gaashaandhigga Xukuumadda Soomaaliya, mudane, Xasan Cali Maxamed (Amar-dambe) oo Baarlamaanka hortegay maalin ka hor ayaa su’aalihii la weydiiyay waxaa kamid ahaa in uu faah-faahin ka bixiyo sababta keentay in ciidanka ilaalada u ah xildhibaannada lagu celiyo banaanka xarunta Madaxtooyada.
Wasiirka oo ka jawaabayay su’aashaasi waxaa uu yiri “In ciidamada ilaalada u ah xildhibaannada lagu reebo banaanka xarunta Baarlamaanka iyo Madaxtooyada waxaa keenay dhacdadii weerarka ahaa ee dhawaan al shabaab ay ka geysteen hotel SYL oo ku dhow madaxtooyada. Waxaa xusid mudan in qaar kamid ah ilaalada xildhibaannada ay ku geeryoodeen goobta”.
“Maalinta uu weerarku dhacay kulan Baarlamaan ma jirin laakiin haddii uu jiri lahaa khasaaraha inta aan hadda oggnahay wuu ka badan lahaa. Marka uu Baarlamaanka furanyahay waxaa albaabka yimaada askar ka tira badan 100 oo ilaalo u ah xildhibaannada oo runtii aan aqoon isku laheyn maxaa yeelay qaar waxaa ay ka socdaan Booliska, Nabad Sugida iyo qeybaha kala ee ciidanka”.
“Waxaan ku guda jirnay in arrintaasi la baaro. Xarunta hadda Baarlamaanka uu ku shaqeeyo waa KMG, waxaa jira ciriiri badan, marka waxaan isla go’aamin doonaan halka ay ciidanka joogi karaan kuna badbaadi karaann”.